Lehilahy avy any Aostralia Mampiaraka ao Aostralia
Amin’izao fotoana izao tapitrisa ny olona any Aostralia dia fifangaroan’ny saika ny Firenena rehetra eto amin’izao tontolo izao izay fantatra: ny Britanika, ny Anarana, Italiana, Grika, Breziliana, holandey, Tiorka, Libaney, sns. Ka rehefa mihaona amin’ny lehilahy iray avy any Aostralia dia zava-dehibe mba hahitana ny niandohan’ny sy fitenin-drazany. Ankoatra izany, dia mifandray amin’ny fahasamihafana izany zom-pirenena ao amin’ny firenena, ny toetra amam-panahy ny Aussie dia sarotra mifangaro rehetra ny mety ho endri-tsoratra azonao an-tsaina.
Amin’ny ankapobeny, izany no lehibe, mahomby eo amin’ny raharaham-barotra na ny matihanina ny asa, misokatra sy marina ny olona. Raha toa Ianao vao milaza fa mitady vehivavy ho amin’ny fanambadiana, ny fomba izany. Ny Aussie dia aoka ho tso-po sy mahitsy, ary dia faly mizara Aminareo ny aina mipetraka eo ambanin’ny ny toe-javatra ny»valifaty»ny fihetseham-po sy ny fahadiovam-po. Aostralia dia firenena iray ao amin’ny ilabolantany atsimo, mibodo avy any amin’ny tanibe Aostralia sy ny Nosy sasany ny Indianina sy ny ranomasimbe Pasifika. Aostralia dia ny fahenina firenena lehibe indrindra eto amin’izao tontolo izao.
Ny mponina mikasika ny telo amby roa-polo tapitrisa
Aostralia dia iray amin’ireo firenena mandroso, satria ny fahatelo ambin’ny folo lehibe indrindra ny toe-karena eto amin’izao tontolo izao. Ny panjakana laharana avo amin’ny faritra maro eo amin’ny fiainana, toy ny kalitaon’ny fiainana, fahasalamana, fanabeazana, ara-toekarena, ny fahalalahana, ny fiarovana ny fahalalahan’ny olom-pirenena sy ny zo politika
← Ny amin'ny Chat Roulette lahatsary amin'ny chat Breziliana
Breziliana tovovavy eo amin'ny fampisehoana Privat-dance →